Burmese - Doing the impossible, cutting through fear | Dan Meyer | TEDxMaastricht - closed TED | Amara
ကြောက်စိတ်ကို ထိုးဖောက်ရင်း မဖြစ်နိုင်တာကို ပြုလုပ်ခြင်း။ | Dan Meyer | TEDxMaastricht
အိန္ဒိယမှာ မဟာရာဇာလို့ခေါ်တဲ့ ဘုရင်တစ်ပါး
ရှိပြီး သူ့မွေးနေ့အတွက် အကြီးအကဲအားလုံး
ဆက်သရမယ်လို့ အမိန့်ထုတ်ပြန် လိုက်တယ်။
တစ်ချို့က ပိုးထည်အကောင်းစားတွေ၊ တစ်ချို့
က ဆန်းပြားတဲ့ ဓားတွေ ဆက်သကြတယ်။
သူက တက်လာခိုက် ဘုရင့်သားတော်က
မေးတာက " ဘုရင်ကြီးအတွက် ဘာယူခဲ့လဲဗျ။"
အဖိုးအိုက လက်ကို ဖြေးညှင်းစွာ
ခရမ်း၊ အဝါ၊ အနီ ၊ အပြာရောင်တွေ
လဲ့နေတဲ့အရမ်းကို လှပတဲ့ ခရုခွံတစ်ခုပါ၊
"ဒါက ဘုရင်ကိုပေးတဲ့ လက်ဆောင်မဟုတ်
အဖိုးအိုက သူ့ကို ဖြည်းညှင်းစွာ
" လျှောက်ခဲ့ရတဲ့ ခရီးက လက်ဆောင်ရဲ့
ခဏနေရင် ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော်
မပေးခင်မှာ ခင်ဗျားတို့ကို လမ်းလျှောက်
ကလေးလေး အဖြစ်နဲ့ စခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်နှစ်ယောက် ကလေးလေးအဖြစ်နဲ့ စခဲ့လဲ။
ခင်ဗျားတို့ တဝက်လောက်ပေါ့၊ ရပါတယ်။
ကောင်လေး၊ မင်းမေမေကို ငါတွေ့ချင်တယ်။
ဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော် နှစ်များစွာ
အကြောင်းက ဒီနေ့ဟာ ခင်ဗျားတို့ရှေ့မှာ
ခင်ဗျားတို့ဟာ ဘဝမှာ မဖြစ်နိုင်တာတွေကို
"Trefbal" လို့ခေါ်တဲ့ ဘောလုံးရိုက်တာ၊
သော့ချက် စကားလုံး သုံးလုံးပါ
ဘဝမှာ မဖြစ်နိုင်တာကို ဘာလို့
ဒီတော့ ကျွန်တော့ ခရီး၊
ဘဝမှာ မဖြစ်နိုင်တာကို ခင်ဗျား
အောက်တိုဘာ ၄ ရက် ၂၀၀၇ ခု၊
ကျွန်တော့ ရင်ခုန်နှုန်းက အရမ်းမြန်နေတယ်၊
အတက် ဒူးတွေက တုန်နေတယ်၊
Harvard University က
Sanders Theatre မှာ
"Sword Swallowing..and its Side Effects"
ဆေးသုသေသန စာတမ်းအတွက် ၂၀၀၇ ခု
ဆေးပညာ Nobel ဆုယူဖို့ပါ။
ဒါကို ကျွန်တော် အရင်က တစ်ခါမှ
ကျွန်တော့အတွက် ဒါဟာ မဖြစ်နိုင်တဲ့
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့ ဘဝရဲ့အမှတ်ရစရာ
အောက်တိုဘာ ၄ ရက် ၁၉၆၇ မှာ
ကြောက်တတ်၊ ရှက်တတ်၊ ငပိန်ရိုး၊
ကြောက်တတ်၊ ရှက်တတ်၊ ငပိန်ရိုး
သူက အမှောင်ကို ကြောက်တယ်၊
ပင့်ကူတွေ၊ မြွေတွေ ကြောက်တယ်။
သူက ရေနဲ့ ငါးမန်းတွေကို ကြောက်တယ်၊
အပ်တွေ ၊ စူးတွေ၊ ချွန်တဲ့
ဒါပေမဲ့ အခြားဟာတွေထက် သူ ကြောက်တာက
မိမိကိုယ်ကို အထင်သေးတာ၊ သိမ်ငယ်စိတ်ပေါ့။
မသိတာ တစ်ခုခု ဆိုတာတောင်ပေါ့.
လူမှုရေး ပူပန်မှု ရောဂါပေါ့။
အကြောင်းက ကျွန်တော့ကို အနိုင်ကျင့်
သူတွေ စနောက်၊ ရိုက်မှာ ကြောက်ခဲ့လို့ပါ။
ကျွန်တော့ကို လှောင်ပြောင်ပြီး မျိုးစုံ
ခေါ်ဖူးတယ်။ သူတို့ရဲ့ သမင်ပွဲတွေမှာ
သူတို့ ကျွန်တော့ကို ပေးကစားတဲ့
ကျွန်တော်က ဘောလုံးရိုက်တာ မတော်ဘူးလေ။
မော့အကြည့်မှာ ဒီ အလွန်မြန်တဲ့
ဘုန်း၊ ဘုန်း၊ ဘုန်း။
မျက်နှာဟာ ရဲပြီး စပ်ဖျဉ်ဖျဉ်းဖြစ်ခဲ့တယ်၊
နားတွေက ရဲပြီး စပ်ဖျဉ်ဖျဉ်းဖြစ်ခဲ့တယ်၊
"တုတ်တွေ၊ ခဲတွေက အရိုးတွေ ကျိုးနိုင်ပေမဲ့
စကားလုံးတွေက ဘယ်တော့မှ မနာဘူး"
ဒါ မုသား တစ်ခုပါ။
ဓားရှည် တစ်လက်လို စူးဝင်နိုင်တယ်။
နက်ရှိုင်းတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ပေးနိုင်တယ်။
စကားလုံးတွေဟာ အဆိုးဆုံး ရန်သူ
ဒါပေမဲ့ အိပ်မက်တွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။
အိမ်ကို ပြန်ပြီး Superman ရုပ်ပြတွေဆီ
Superman ရုပ်ပြတွေ ဖတ်ပြီး
Superman လို လူစွမ်းကောင်းဖြစ်ဖို့
ကမ္ဘာပတ်လည် ဝဲပျံကာ အာဂလူသား
အစွမ်းရှိတုန်း အသက်တွေ ကယ်ချင်တယ်။
Guinness ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းစာအုပ်နဲ့ Ripley
ရဲ့ ယုံချင်ယုံ၊ မယုံချင်နေ ဖတ်တယ်။
Ripley ရဲ့စာအုပ် ဖတ်ဖူးကြလား။
ဒါ လုပ်ချင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောတာပါ။
အနိုင်ကျင့်သူတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ တကယ့်
မှတ်သားစရာ တစ်ခုခု လုပ်ချင်တယ်။
ကိုယ့် ဘဝမှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိတာကို သိချင်တယ်။
ကမ္ဘာကို ပြောင်းဖို့ မယုံနိုင်စရာ
ရှေ့ ၁၀ နှစ်သွားကြည့်ပါ။
ကျွန်တော့ ၂၁ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မတိုင်မီ
တစ်ရက်တည်းမှာ ဘဝတစ်ခုလုံး ထာဝရ
ပြောင်းလဲစေမယ့် ဖြစ်ရပ်နှစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း Tamil Nadu
ကျွန်တော့ဆရာ၊ မိတ်ဆွေက မေးတာက "Daniel
သူက ဒါတွေက ဘဝ ရည်မှန်းချက်တွေပေါ့ကွာ။
ပေါင်းထားတာပါ၊ ဆိုပါစို့ မင်းလုပ်ချင်တာ
အရမ်းကြောက်တာ၊ ကြောက်စရာ အများကြီး။"
အဲဒီညက ဘန်ဂလို အမိုးပေါ်က
နှလုံးခုန် မြန်နေတယ်၊ ဒူးတွေက တုန်နေတယ်။
အဲဒီတုန်းက ကြောက်တာနဲ့ မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ့်ဘဝအတွက် တိုက်ခိုက်ခြင်း အသက်ငင်
ချိန်က အသိစိတ်ကနေ ဝင်လိုက်၊ ထွက်လိုက်ပါ။
ဦးနှောက်က ငှက်ဖျား အပူချိန်
၁၀၅ မှာ ပူလောင်နေတယ်။
တွေးမိတာက "ဘဝမှာ ငါလုပ်ချင်တာက ဘာလဲ။"
ဒါနဲ့ ၂၁ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မတိုင်ခင် ညမှာ
နားလည်လိုက်တာက ဒီ ခြင်ကောင်လေးဟာ
အလေးချိန် မိုက်ခရို ၅ ဂရမ်မပြည့်တဲ့၊
ဒီခြင်ဟာ ကီလို ၁၇၀၊
ကီလို ၈၀ လူကို ထုတ်နိုင်ရင်
သဘောပေါက်တာက ဒါဟာ ကျွန်တော့ ဒြပ်စင်ပုန်းပဲ
လူတွေကို တစ်နှစ် သန်းချီ သတ်နေတာပါ။
နောက် သဘောပေါက်တာက မဟုတ်ဘူး၊
ကြောက်စိတ်က ကိုယ့်ရဲ့ ဒြပ်စင်ပုန်း
အကြောက်ထဲမှာ နေနိုင်ပြီး အဲဒီည
ဘဝကို ရဲရဲ ရှင်သန်နိုင်တယ်ပေါ့။
သေခြင်းကို ရင်ဆိုင်ခြင်းဟာ တကယ်ပဲ ကိုယ့်
လူတိုင်း သေတယ်၊ လူတိုင်း တကယ်
ကျွန်တော်တို့ ရှင်သန်တာက သေခြင်းထဲမှာ၊
သိတဲ့အတိုင်း သေဖို့ သင်ယူတဲ့အခါ
ဒါနဲ့ ကိုယ့်ဇာတ်လမ်းကို ပြောင်းတော့မယ်လို့
"ဘုရားသခင်၊ ၂၁ နှစ်မွေးနေ့ထိ နေခွင့်ပေးပါ။
ဘဝကို အကြောက်က စိုးမိုးတာ
ဘဝမှာ မယုံနိုင်စရာ တစ်ခုခု လုပ်ချင်ပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဘဝပေး တာဝန်ကို ရှာချင်ပါတယ်
ဒီညက ရှင်ကျန်ခဲ့တာကို မပြောပါဘူး။
ကိုယ်တိုင် ကြံဆတွက်ဆ ကြည့်ကြပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီညက ကျွန်တော် ဦးဆုံး
လုပ်ချင်တာ ၁၀ ခု စာရင်းလုပ်ခဲ့တယ်။
အဓိက ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီးတွေကို လည်ပတ်
ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ၇ ပါးကိုလည်၊
ဘာသာစကားတွေ တသီကြီး သင်ယူ၊
အမေဇုံထဲက အင်ဒီယန်း လူမျိုးစုနဲ့ နေထိုင်၊
ဆွီဒင်က အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ကိုတက် ချင်တယ်။
နေထွက်ချိန် ဧဝရက်တောင်ကို မြင်ချင်တယ်၊
Nashville က ဂီတလုပ်ငန်းမှာ
ဒီစာရင်း အများစု ပြီးမြောက်ခဲ့တယ်။
စာရင်းထဲမှာ ၅ ခု၊ ၁၀ ခုထပ်ဖြည့်တော့
နောက် ခုနှစ်နှစ်အတွက် Bahamas က
စားဖို့ ငါးမန်းတွေ၊ ငါးလက်ထုံတွေကို
ငါးမန်းတွေနဲ့ ရေကူးဖို့ သင်ယူခဲ့တယ်။
အဲဒီကနေ Mexico ကို ပြောင်းခဲ့ပြီး
နောက် Ecuador က အမေဇုံ
Pujo Pongo Ecudor မှာ
Nashville ဂီတလုပ်ငန်းကို ပြောင်းခဲ့တယ်၊
Stockholm ပြောင်းခဲ့ပြီး အဲဒီမှာ
အဲဒီမှာ အာတိတ်စက်ဝန်းအထက်က Mt.
၁၉၉၇ မှာ ဓားမျိုချသူ တစ်ဒါဇင်
ဓားမျိုချသူ တစ်ယောက်ကို တွေ့ပြီး
သူက "ခင်ဗျားကို နည်း ၂ နည်းပေးမယ်၊
တစ်။ ဒါက အင်မတန် အန္တရာယ်များတယ်။
ဒါလုပ်ရင်း လူတွေ သေခဲ့တယ်။
ဒါနဲ့ ဒါကို လုပ်ချင်တဲ့စာရင်းထဲ ဖြည့်တယ်။
နေ့တိုင်း တစ်ရက် ၁၀ ကြိမ်ကနေ
၄ × ၃၆၅ (×၁၂) ဆိုတော့
၂၀၀၁ ခုနှစ် ပထမဆုံးဓား
မအောင်မြင်တဲ့အကြိမ် ၁၃၀၀၀၀ လောက်ပေါ့။
ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ဖို့
ဒါနဲ့ စာအုပ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊
မှတ်တမ်းတိုင်းကို ရှာဖွေပြီး သဘာဝဗေဒ၊
ဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြုတွေနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်၊
Sword Swallowing and its
Side Effects ဆိုတဲ့
၂ နှစ်ကြာ သုသေသနစာတမ်း ပြုစုခဲ့တယ်။
ဒါကို British Medical Journal
ဒီည နောက်ပိုင်းကလွဲပြီး ခင်ဗျားတို့ အရင်က
အသားတုံးကို ဓားနဲ့ လှီးနေတုန်းမှာ
ကျွန်တော် ၂၀ နှစ်သားတုန်းက အရင်းဆုံး
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀၀၀၀ ဘီစီ လောက်ကပေါ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၁၅၀ ကျော်ကနေ
ဓားမျိုချသူတွေကို သိပ္ပံနဲ့ ဆေးပညာ
ဂျာမဏီ Freiburg က Dr. Adolf Kussmaul
ကနေပြီး ၁၈၆၈ မှာ ခိုင်ခံတဲ့
၁၉၀၆ မှာ ဝေလနယ်မှာ
မျိုချခြင်း ရောဂါတွေ၊ အစာချေခြင်း၊
ဒါပေမဲ့ နှစ် ၁၅၀ ကျော်ကာလမှာ
ရာချီတဲ့ ဒဏ်ရာရမှုတွေ၊ ဒါဇင်ချီတဲ့
ဒါက Dr. Adolf Kussmaul ထွင်ခဲ့တဲ့ ခိုင်ခံ့
တဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကြည့် မှန်ပြောင်းပါ။
ဒါပေမဲ့ သိလိုက်ရတာက နှစ် ၁၅၀
ကျော်မှာ လန်ဒန်က သူ့နှလုံးကို
ဓားစိုက်သွားတဲ့ ဓားမျိုသူ အပါအဝင်
သေဆုံးသူ ၂၉ ဦးရှိတာပါ။၊
သိရသေးတာက နှစ်စဉ် ၈ ခုမှ ၃ ခုလောက်
ကျွန်တော်သိရတာက ဖုန်းခေါ်တာ ရလို့ပါ။
တစ်ခုက Sweden က၊ တစ်ခုက Orlando က
ဒီတော့ အင်မတန် အန္တရာယ်များပါတယ်။
၂ နှစ်ကနေ ၁၀ နှစ်ထိ
မဖြစ်နိုင်တာကို လုပ်ဖို့ သင်ယူပုံပါ။
မဖြစ်နိုငိတဲ့ ၉၉.၉၉% ကို အာရုံမစိုက်ပါနဲ့။
ဖြစ်နိုင်တဲ့ ၀.၁% ကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီး
စိတ်ထဲက ခရီးကို ခေါ်သွားပါရစေ။
ဓားတစ်လက်မျိုချဖို့ ရုပ်ကို ကျော်လွန်တဲ့
စိတ် ကမ္မဋ္ဌာန်း၊ ထက်မြက်တဲ့
သမာဓိ၊ အပ်ကျတဲ့တိကျမှုနဲ့ လိုပါတယ်။
ခွဲထားနိုင်ဖို့ အလိုလျောက် ခန္ဓာ
အကြိမ် ၁၀၀၀၀ ကျော် တမင်တကာ
ဦးနှောက် သံခိပ်ကနေ၊ အထပ်ထပ်
အခု ဓားမျိုချသူရဲ့ ကိုယ်တွင်း ခရီးလေး
၉၀ ဒီဂရီ လှည့်ချ လမ်းကြောင်း
အစာပြွန် ကြွက်သားစု အပေါ်ဘက်
ကြွက်သား တုံ့ပြန်မှုကို ချုပ်ကာ
သေသေချာချာ ကြည့်ရင် နှလုံးဟာ
ဓားနဲ့အတူ ခုန်တာကို တွေ့နိုင်တယ်၊
အကြောင်းက ဓားက နှလုံးကို မှီထားရင်း
ဒါက အယောင်ဆောင်လို့ မရတဲ့ဟာပါ။
အူသိမ်လမ်းတစ်လျှောက် ဗိုက်ထဲက အဆို့
ကိုယ့်လူတို့ ခင်ဗျားတို့ မိန်းမတွေကို
လူတွေက မေးတာ၊ ပြောတာက
ဒါကို မျိုချဖို့သတ္တိ အတော် ရှိရမှာနော်။"
မဟုတ်တာ၊ ဘယ်ကလာ သတ္တိရှိရမှာလဲ၊
ကျရှုံးနဲ့ ငြင်းပယ်ခြင်းကို စွန့်စားဖို့၊
ယိုဖိတ်နေတဲ့ ကလီစာတွေ တကယ်ရော၊
မြင်တဲ့အတိုင်း တကယ့် အံ့သြစရာက
ဓားကို ချက်ချင်း မျိုချနိုင်တာ
Ripley ရဲ့ ယုံချင်ယုံ၊မယုံချင်နေအတွက်
ရေအာက် ပေ ၂၀ က ငါးမန်း ၈၈ ကောင်
အပူချိန် ၁၅၀၀ ဒီဂရီ ရဲရဲနီအောင် အပူ
ပေးထားတဲ့ Stan Lee ရဲ့ အာဂလူသားတွေ
Ripley (သို့) Guinness အတွက်
America's Got Talent မှာ
ဆေးပညာ Ig Nobel Prize
နိုး၊ ဒါက တကယ့် မှတ်သားစရာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါက လူတွေထင်တာပါ။ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။
ရှက်တတ်၊ ငပိန်ရိုး ငကြောက်လေးကို၊
ရေနဲ့ ငါးမန်းတွေကို ကြောက်သူ၊
ဘုရာသခင်က ခေါ်ယူပြီး ပေ ၃၀၀၀၀ အမြင့်
ချွန်တဲ့ အရာတွေကို မျိုချစေတာ
ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ ကမ္ဘာတစ်ခွင်က ခင်ဗျား
တို့လို ပရိတ်သတ်ကို စကားပြောစေတာပါ။
ဒါက ကျွန်တော့အတွက် တကယ့် အံ့စရာပါ။
ကျွန်တော် အမြဲ မဖြစ်နိုင်တာလုပ်ချင်တယ်။
ကျွန်တော် အမြဲ မဖြစ်နိုင်တာ
ဘဝမှာ မှတ်သားလောက်တာ တစ်ခုခု
လုပ်ပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်လဲချင်တာ
အာဂလူသား အစွမ်းတွေပြပြီး အမြဲ
ကမ္ဘာပတ် ဝဲပျံ၊ အသက်တွေကို
ကယ်ချင်တာ အခု ဖြစ်ပြီလေ။
သိတဲ့အတိုင်း၊ ကျွန်တော်က အမြဲ
ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဘဝပေး တာဝန်ကို
ဒါက ဓားတွေနဲ့ မဆိုင်၊ ခင်ဗျားတို့
ထင်တာမဟုတ်၊ ခွန်အားတွေ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တာဝန်က
တစ်ခါ ဓားတစ်လက်၊ တစ်ခါ ဓားတစ်လက်ပေါ့။
တစ်ခါ ဓားတစ်လက်၊ တစ်သက် တစ်ခါပေါ့။
ခင်ဗျားတို့ ဟာက ဘာလဲ။
ဘာလုပ်ဖို့ ခင်ဗျားကို ဒီမှာ
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မဟာအင်အားက ဘာလဲ။
၇ ဘီလီယံကျော်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့လူဦးရေအနက်
ကျန်နေတဲ့ ဓားမျိုချသူတွေဟာ ယနေ့ ကမ္ဘာ
တစ်ခွင်မှာ ဒါဇင် မပြည့်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျား ပဲရှိပါတယ်
ဘာက ခင်ဗျားကို ထူးခြားစေတာလဲ။
ခင်ဗျားရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ပြောပါ
ခင်ဗျား အသံက တိမ်ပြီး
နောက်ဆုံး ခင်ဗျားတို့အိပ်မက်တွေကို သိပ်
ထူးဆန်းတဲ့ပုံ မပေါက်စေတာ သေချာတယ်။
အိပ်မက်တွေနောက်ကို လိုက်ကြပါ ပရိတ်သတ်ကြီး
ကျွန်တော်ဟာ မဖြစ်နိုင်တာ ဘယ်တော့မှ
ဒီမှာ ကျွန်တော်ကရှိတာက ဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ
မဖြစ်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ သက်သေထူဖို့ပါ။
ဒါက အင်မတန် အန္တရာယ်များပါတယ်။
ဒါကတော့ ခင်ဗျားတို့ အကူအညီလိုတယ်။ တစ်၊
ပရိတ်သတ်။ နှစ်၊ သုံး။
Dan Meyer: (နိုး) ရေတွက်တဲ့အပိုင်းက
ခင်ဗျားတို့ အကူလိုတယ်။ အားလုံး အိုကေ။
အိုကေ၊ ကျွန်တော်နဲ့ လိုက်ရေပါ။
နိုး၊ နှစ်လေ၊ ခင်ဗျားတို့သိပါတယ်။
ပြောခဲ့တယ်၊ အခု ပြီးပြီလေ။
မဖြစ်နိုင်တာက ကြောက်တတ်၊ ရှက်တတ်၊
ငပိန် ငကြောက်လေးက အကြောက်ကို ရင်ဆိုင်ဖို့၊
ဟောဒီက TEDx စင်ပေါ်တက်ရပ်ပြီး
တစ်ခါကို တစ်ခွန်း၊ တစ်သက်ကို တစ်ခါပါ။
ဒီမှာ ကျွန်တော့ လက်ဆောင်ပါ။
အစီအစဉ်မှူး၊ ကျေးဇူးပါ၊ Dan Meyer ။
sann tint approved Burmese subtitles for Doing the impossible, cutting through fear | Dan Meyer | TEDxMaastricht
Myo Aung edited Burmese subtitles for Doing the impossible, cutting through fear | Dan Meyer | TEDxMaastricht
Myo Aung accepted Burmese subtitles for Doing the impossible, cutting through fear | Dan Meyer | TEDxMaastricht
sann tint edited Burmese subtitles for Doing the impossible, cutting through fear | Dan Meyer | TEDxMaastricht